Mayelana NATHI - I-Hangzhou Hongli Machchan Co, Ltd.
Yasungulwa ngo-Agasti 2002, inkampani inabasebenzi abangaphezu kwe-70, izikhungo zezobuchwepheshe ezi-6, futhi ibhizinisi elisekelwa kwezobuchwepheshe esifundazweni saseZhejiang. Le nkampani itholakala epaki yezimboni eLinpu Town, Xiaoshan, Hangzhou City, eSifundazweni saseZhejiang, nekhilomitha elilodwa ukusuka ekuphumeni kukaLinpu kweHangzhou Jinhua Quzhou Expressway eduze kwendlela elandelwayo eseMpumalanga kabili yomgwaqo wesifundazwe 03. Inkampani eya emshinini wokusika wedijithali, okungewona -mishini yokwakhiwa nokuklama, umugqa we-escalator umhlangano, izingxenye zokwenza kusekelwe.
Ifilosofi yebhizinisi: ubuqotho, ubumbano, i-pragmatism, ukuqamba kanye nokukhula okuqhubekayo
Yasungulwa ngonyaka we-1997, I-Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments CO., I-LTD ingumenzi ochwepheshe futhi oholayo wemishini yokuhlonza ejwayelekile kufaka phakathi i-Digital Thermometers, i-Infrared Thermometers, ne-Digital Sphygmomanometers njll. Umthamo wethu wanyanga zonke cishe amayunithi we-850,000 weyunithi ye-thermometer namayunithi ayi-100,000 e-Sphygmomanometer.
Njengebhizinisi lobuchwepheshe eliphakeme, Umnyango wethu we-R&D uhlanganisa onjiniyela, ochwepheshe kanye nomqambi abanolwazi oluningi lwe-optoelectronics, semiconductor ne-IC design njll.
Sesivele sisungule uhlelo lweQC oluqinile nolusebenzayo. Yonke imikhiqizo yethu ikhiqizwa ngokuqinile ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi lwe-ISO 13485 kanye ne-21CFR820, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo ze-Medical CE nezase-US FDA.
Inkonzo enhle kakhulu nekhwalithi ethembekile isisiza ukuba sinqobe idumela lomhlaba wonke, isibonelo:
IGermany, iFrance, i-Italy, iSpain, i-United Kingdom, nePoland… I-USA, iBrazil, i-Argentina, iColombia, iMexico, iChile… I-Australia, i-Philippines, i-Philippines, i-Indonesia, i-Thailand, i-Singapore… ENingizimu Afrika, eNigeria… Namanye amazwe
Kuzokwaziswa kakhulu ukuthi uma ungaxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane mayelana nenkampani nemikhiqizo yethu. Uyemukelwa ukusebenzisana nathi nge-OEM ne-ODM.